Synapse သိပ်သည်းဆနှင့် Dendritic ရှုပ်ထွေးမှုကိုကိုကင်းကိုယ်တိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှ (၇) ရက်ကြာအတင်းအကြပ်ရှောင်ကြဉ်ခြင်းခုနစ်ရက်အပြီးတွင် Prefrontal Cortex တွင်လျှော့ချထားသည် (၂၀၁၄ - သင်၏ ဦး နှောက်တွင် Porn On On
synapses Density နှင့် Dendritic ရှုပ်ထွေးကင်းကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ရေး (ထံမှအတင်းအဓမ္မ Abstinence ၏ခုနစ်ရက်ပတ်လုံး 2014 အောက်ပါ Prefrontal Cortex အတွက်လျှော့ချနေ
PLoS တစ်ခုမှာ။ 2014 ဇူလိုင် 29;9(7): e102524 ။ Doi: 10.1371 / journal.pone.0102524 ။ eCollection 2014 ။
Khampaseuth Rasakham,1 Heath ဃ Schmidt က,2 ကီဗင်ကေး,1 Megan N. Huizenga,1 Narghes Calcagno,1 R. ခရစ္စတိုဖာပီယပ်,2 Tara အယ်လ် Spiers-ဂျုံးစ်,#1,¤ နှင့် Ghazaleh Sadri-Vakili#1,*
ရိုင်ယန် K. Bachtell, Editor ကို
နှစ်ဦးစလုံးသည်လူ့စွဲနှင့်စွဲလမ်း၏ကြွက်မော်ဒယ်များအတွက်နာတာရှည်ကင်းထိတွေ့နောက်ပိုင်းတွင်ဆုလာဘ်အပြောင်းအလဲနဲ့နှင့်အဆင့်မြင့်အမိန့်အလုပ်အမှုဆောင် function ကို dysregulates ရာ prefrontal cortical လှုပ်ရှားမှု, လျော့နည်းစေသည်။ အပြုအမူ၏ဤချို့ယွင်းတံခါးကအသားတင်အကျိုးသက်ရောက် relapse မှတိုးမြှင့်အားနည်းချက်ဖြစ်ပါတယ်။ ယခင်ကကျွန်ုပ်တို့သည် medial prefrontal cortex အတွက် (BDNF) ဟူသောအသုံးအနှုနျး (PFC) ဦးနှောက်-ဆင်းသက်လာ neurotrophic အချက်ထဲမှာကိုကင်း-သွေးဆောင်တိုးပြသကြပါပြီကင်း၏အားဖြည့်ထိရောက်မှု blunts တစ် neuroadaptive ယန္တရားဖြစ်ပါတယ်။ BDNF အာရုံခံရှင်သန်ရပ်တည်ရေးနှင့် Synaptic plasticity ထိခိုက်လူသိများသည်နှင့်အမျှကျနော်တို့ကိုကင်း Self-အုပ်ချုပ်မှုကနေ abstinence အာရုံခံ shape သုက်ပိုးပုံသဏ္ဌာန်နှင့် PFC အတွက် Synaptic သိပ်သည်းဆမြားတှငျပွောငျးလဲဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြမယ်လို့သောအယူအဆစမ်းသပ်စစ်ဆေးပါတယ်။ တစ်ဝတ္ထု technique ကို, ခင်းကျင်း tomography နှင့် Golgi အစွန်းအထင်းကိုအသုံးပြုခြင်းသည်ကြွက် PFC အတွက် morphological အပြောင်းအလဲများကိုအတင်းအဓမ္မ abstinence ၏ကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးနှင့် 14 ကာလ၏7ရက်ပေါင်းအောက်ပါဆန်းစစ်ခဲ့ကြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ရလဒ်များကိုခြုံငုံ dendritic အကိုင်းနှင့်စုစုပေါင်း Synaptic သိပ်သည်းဆသိသိသာသာကြွက် PFC အတွက်လျှော့ချဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြသည်။ ဆနျ့ကငျြ, ပါးလွှာ dendritic ကျောရိုး၏သိပ်သည်းဆသိသိသာသာ PFC ၏အလွှာ V ကိုပိရမစ်ကြီးအာရုံခံအပေါ်တိုးမြှင့်နေကြသည်။ ဤရွေ့ကားတွေ့ရှိချက်ပြောင်းလဲနေသောဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာပြောင်းလဲမှုများကိုကင်း-စွဲတစ်ဦးချင်းစီအတွက် PFC များ၏လေ့လာ hypo-လှုပ်ရှားမှုအထောက်အကူပြုစေမည်အကြောင်းကင်း abstinence ကာလအတွင်းဖြစ်ပေါ်ကြောင်းဖော်ပြသည်။
ဆုလာဘ်တိုက်နယ်အတွင်းဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာပလတ်စတစ်ပြောင်းလဲခြင်းကိုကင်း၏မူးယစ်ဆေးဝါးရှာဖွေမှုအပြုအမူကိုထိန်းသိမ်းရန်စွမ်းရည်မြင့်သောအဓိကယန္တရားများအဖြစ်အဆိုပြုထားသည် (ပြန်လည်သုံးသပ်သည် ) ။ ယခင်လေ့လာမှုများနျူကလိယ accumbens အတွက် dendritic Arbore နှင့်ကျောရိုးသိပ်သည်းဆတစ်ခုတိုး (NAc) ပြသကြ -, ventral tegmental ဧရိယာ , ထို prefrontal cortex (PFC)  ကိုကင်းမှထိတွေ့မှုကအောက်ပါ။ အများဆုံးလေ့လာမှုများ NAc ၏အလုပ်မဖြစ်လှုပ်ရှားမှုနဲ့ဆက်စပ်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာအပြောင်းအလဲများအပေါ်အာရုံစူးစိုက်ကြစဉ်တွင်သိသိသာသာနည်းပါးလာလေ့လာမှုများ PFC အတွက်ပွောငျးလဲဆန်းစစ်ခဲ့ကြသည်။ သက်သေအထောက်အထားများအများအပြားလိုင်းများနှစ်ဦးစလုံးသည်လူ့စွဲထဲမှာနာတာရှည်ကင်းထိတွေ့ပြီးနောက် PFC ၏ကမောက်ကမဖြစ်မှုကိုသရုပ်ပြ ,  နှင့်စွဲလမ်း၏ကြွက်မော်ဒယ်များအတွက် , ။ ထို့ကြောင့် PFC အတွက်ပေါ်ပေါက်သောဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာအပြောင်းအလဲများကို characterizing စွဲအခြေခံသောမော်လီကျူးဖြစ်ရပ်များကိုနားလညျဖို့ဆိုင်တဲ့ဖြစ်ပါတယ်။
PFC သည်လှုံ့ဆော်မှုထိန်းချုပ်ခြင်းနှင့်ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်းများကိုထိန်းညှိပေးပြီးလူတစ် ဦး တစ်ယောက်၏အပြုအမူကိုထိန်းချုပ်နိုင်စွမ်းတွင်အထူးသဖြင့်မူးယစ်ဆေးဝါးမှီခိုမှုတွင်အရေးပါသောအခန်းကဏ္ plays မှပါ ၀ င်သည်။ , ။ ဥပမာအားဖြင့်, ကိုကင်းစွဲတစ်ဦးချင်းစီအတွက်, prefrontal cortex activation မူးယစ်ဆေးရုပ်သိမ်းရေးနှင့်ဆက်စပ်နှင့်အဆင့်မြင့်အမိန့်အလုပ်အမှုဆောင်တုံ့ပြန်မှုနှောင့်အယှက်ဖြစ်ပါတယ်လျော့နည်းသွား , , relapse မှအားနည်းချက်မြှင့်တင်ရန်နိုငျသော။ ကြွက်များတွင်, PFC အတွက်တိုးမြှင့်အာရုံခံလှုပ်ရှားမှုကင်းစားသုံးမှုနှင့်ဆက်စပ်နေသည် , , compulsive မူးယစ်ဆေး-ရှာအပြုအမူ နှင့်ကိုကင်း reinstatement ဆုတ်ခွာပြီးနောက် -။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, အမြှေးပါး bistability နာတာရှည်ကင်းအုပ်ချုပ်ရေးအောက်ပါ PFC အတွက်ဖျက်သိမ်းနေသည် ။ နောက်ဆုံးတွင် PFC အတွက်မူးယစ်ဆေး-သွေးဆောင်ဇီဝဖြစ်စဉ်လှုပ်ရှားမှုကင်း Self-အုပ်ချုပ်မှုကနေဆုတ်ခွာစဉ်ကစိန်ခေါ်မှုတစ်ရပ်ဆေးထိုးအုပ်ချုပ်ကြွက်များတွင်ကျိုးသကဲ့သို့ဖြစ်ကြပါစေဖြစ်ပါတယ် , ။ အတူတကွဤလေ့လာမှုများနာတာရှည်ကင်းတစ်ခု inhibitory synapses များ၏အရေအတွက်တိုးလာနှင့် / သို့မဟုတ် PFC အတွက် excitatory synapses တစ်လျှော့ချရေးနှင့်ဆက်စပ်စေခြင်းငှါ PFC အတွက်လေးနက်အလုပ်လုပ်တဲ့အပြောင်းအလဲများကို induces ကဖော်ပြသည်။ သို့သော် PFC အောက်ပါနာတာရှည်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုအတွက်ပေါ်ပေါက်သော morphological ပွောငျးလဲ elucidated ကြပြီမဟုတ်။
ပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှုမှာကျနော်တို့ကိုကင်းကနေ abstinence အဆိုပါ PFC အတွက်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာပြောင်းလဲမှုများကိုဖြစ်ပေါ်စေခြင်းရှိမရှိဆန်းစစ်ရန်ရှာ၏။ Morphological ပွောငျးလဲရိုးရာနည်းလမ်း, Golgi အစွန်းအထင်းအဖြစ်တစ်ဝတ္ထု technique ကို, ခင်းကျင်း tomography သုံးပြီးဆန်းစစ်ခဲ့ကြသည်။ array tomography စုစုပေါင်းနှင့် sub-type ကိုတိကျတဲ့ synapses သိပ်သည်းဆ၏တိကျသောအရေအတွက်ခွင့်ပြုရန်နဲ့ Immunofluorescence နှင့်သုံးဖက်မြင်ပုံရိပ်ပြန်လည်တည်ဆောက်ရေးနှင့်အတူ sectioning ultrathin တစ်ရှူးပေါင်းစပ်တဲ့ထူးခြားတဲ့နည်းလမ်းဖြစ်ပါသည် , ။ ဤအမှုနည်းလမ်းများအသုံးပြုခြင်း, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရလဒ်တွေကို abstinence ပုံစံကိုကင်းတုံ့ပြန်ကြွက် PFC အတွက်သိသိသာသာ plasticity ညွှန်ပြ။
၂၅၀-၃၀၀ ဂရမ်အလေးချိန်ရှိသော Sprague-Dawley ကြွက် (Rattus norvegicus) Taconic Laboratories (Germantown, NY) မှရရှိသည်။ တိရစ္ဆာန်များကိုတစ် ဦး ချင်းစီအနေဖြင့်အစားအစာနှင့်ရေရရှိနိုင်သော ad libitum နှင့်အတူ၎င်းတို့၏အိမ်လှောင်အိမ်ထဲတွင်နေရာချထားသည်။ စမ်းသပ်မှုလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများသည်ယူအက်စ်အမျိုးသားကျန်းမာရေးဌာနမှထုတ်ပြန်သောလမ်းညွှန်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီပြီး Pennsylvania ပြည်နယ်တက္ကသိုလ်မှပဲရယ်လ်မန်ဆေးကျောင်းနှင့်ပဲင်စီလ်ဘေးနီးယားတက္ကသိုလ်ရှိတိရိစ္ဆာန်စောင့်ရှောက်မှုနှင့်အသုံးပြုမှုကော်မတီမှအတည်ပြုခဲ့သည်။
80 / ကီလိုဂရမ် ketamine mg နှင့် 12 / ကီလိုဂရမ် xylazine (; Sigma-Aldrich, စိန့်လူးဝစ်, MO ကို ip) Mg နှင့်အတူခွဲစိတ်မတိုင်မီကအဆိုပါကြွက်များ anesthetized ခဲ့ကြသည်။ တစ်ဦး indwelling silastic ပြွန် (အတွင်းစိတ်ချင်း 0.33 မီလီမီတာ, ပြင်အချင်း 0.64 မီလီမီတာ) ညာဘက် jugular သွေးကြောထဲသို့ဖြည့်စွက်ခြင်းနှင့်အရပ်ဌာန၌ sutured ခဲ့သည်။ အဆိုပါပြွန်ထို့နောက်ပခုံးဓါးကျော်အရေပြားအောက်ဆုံးလွန်ခြင်းနှင့်တိုက်ရိုက် scapulae အထက်တွင်အရေပြားအောက်တွင်ဖော်ပြထားသော sutured ခဲ့ကွောငျးတစ်ကွက် backmount ပလက်ဖောင်း (CamCath, ကင်းဘရစ်, ဗြိတိန်) မှရှုံးခဲ့ပါတယ်။ ပြွန်ပဋိဇီဝဆေး Timentin ၏ 0.3 ml နှင့်အတူနေ့စဉ်မှုများကိုထည့်သွင်းတွက်ချက်ခဲ့ကြသည် (disodium / ပိုတက်စီယမ် clavulanate ticarcillin, 0.93 / ml ကို mg; ဟင်နရီ Schein, Melville, နယူးယော့) heparinized ဆား (10 ဦး / ml) အတွက်ဖျက်သိမ်း။ အဆိုပါပြွန်ပလပ်စတစ် obturators သည့်အခါမဟုတ်အသုံးပြုမှုအတွက်နှင့်တံဆိပ်ခတ်ခဲ့သည်။
ကြွက်များကိုကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးစတင်မတိုင်မီ7ရက်ပေါင်းခွဲစိတ်ရာမှပြန်လည်နာလန်ထူရန်ခွင့်ပြုခဲ့သည်။ ကိုကင်း Self-စီမံခန့်ခွဲတိရိစ္ဆာန်များနှင့်ထမ်းဘိုးကိုဆားထိန်းချုပ်မှု: ကြွက်ကျပန်းအုပ်စုနှစ်စု၏တဦးတည်းမှတာဝန်ကျတယ်။ ဆက်ပြောပါတယ်ကင်းတာဟာများအတွက်တုံ့ပြန်ရန်လေ့ကျင့်သင်ကြားတစ်ခုချင်းစီကိုကြွက်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရပုတွဲကိုကင်း-စမ်းသပ်ကြွက်တို့ကကဲ့သို့တူညီသောနံပါတ်နှင့်တာဟာ၏ယာယီပုံစံကိုလက်ခံရရှိကြောင်းတင်သောထမ်းဘိုးကိုဘာသာရပ်နှင့်အတူတွဲခဲ့သည်။ အဆိုပါဆား- လက်ခံ. ကြွက်အဘို့အနှိပ်လီဗာအဘယ်သူမျှမစီစဉ်အကျိုးဆက်များရှိခဲ့ပါတယ်။
အစပိုင်းမှာကင်း-စမ်းသပ်ကြွက်တစ်ဦး fixed- အပေါ် (0.25, 59 s ကိုကျော်ပြုတ်ရည်ကိုကင်း /5μlဆား mg) ကိုမော်ဂျူလာအော်ပရေတာအခန်းများ (Med Associates မှ, စိန့် Albans, VT) တွင်နေရာချခြင်းနှင့်သွေးကြောသွင်းကင်းတာဟာအဘို့အလီဗာစာနယ်ဇင်းမှခွင့်ပြုခဲ့သည် အားဖြည့်များ၏အချိုး 1 (FR1) အချိန်ဇယား။ အဆိုပါ FR20 အချိန်ဇယားကိုအောက်မှာတစ်ခုတည်းအော်ပရေတာ session တစ်ခုအတွက်ကိုကင်းများ၏အနည်းဆုံး 1 တာဟာမှာအောင်မြင်နေတဲ့ကိုကင်း-စမ်းသပ်ကြွက်ပြီးတာနဲ့တုံ့ပြန်မှုလိုအပ်ချက်အားဖြည့်တဲ့ FR5 အချိန်ဇယားကိုမှ switched ခဲ့သည်။ နှစ်ဦးစလုံး fixed အချိုးအချိန်ဇယားအပေါ်တုံ့ပြန်ဘို့, ကိုကင်းတာဟာအများဆုံးအရေအတွက်ကနေ့စဉ် Self-အုပ်ချုပ်ရေး session တစ်ခုနှုန်း 30 ဖို့ကန့်သတ်ခြင်းနှင့်တစ်ဦး 20 ့အချိန်ထွက်ကာလတက်ကြွလီဗာတုံ့ပြန်မှုစာရင်းပြုစုထားသောခဲ့ပြီးသောအချိန်ကာလအတွင်းတစ်ဦးချင်းစီကိုကင်းပြုတ်ရည်, နောက်တော်သို့လိုက်ဒါပေမယ့်ဘယ်သူမျှမစီစဉ်အကျိုးဆက်များခဲ့ခဲ့သည် ။ နေ့စဉ်2ဇအော်ပရေတာအစည်းအဝေးများ (7 ရက် / တပတ်) 14 ရက်ပေါင်းစုစုပေါင်းအဘို့ကောက်ယူခဲ့ကြသည်။ အဘယ်သူမျှမစီစဉ်အကျိုးဆက်များခဲ့သည့်အလုပ်မလုပ်လီဗာအပေါ်ကိုဖန်ဆင်းတုံ့ပြန်ချက်ကိုလည်း FR1 နှင့် FR5 သင်တန်းနှစ်ဦးစလုံးကာလအတွင်းမှတ်တမ်းတင်ထားသောခဲ့ကြသည်။
အဆိုပါ 14 ပြီးနောက်th နေ့စဉ်အော်ပရေတာ session တစ်ခု, ကိုကင်း-စမ်းသပ်နှင့် လက်ခံ. ဆားထိန်းချုပ်မှုကြွက်သူတို့အတင်းအဓမ္မမူးယစ်ဆေး abstinence ၏7ရက်ပေါင်းခံယူရှိရာ၎င်းတို့၏နေအိမ်လှောင်အိမ်မှပြန်လာသောခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါ7တွင်th ကိုကင်း abstinence ၏နေ့, ဦးနှောက်ကိုဖယ်ရှားခဲ့ကြသည်နှင့် PFC ရေခဲပေါ်ခွဲဖြာခဲ့သည်။ ကိုကင်း abstinence ၏ခုနစ်ရက်ပတ်လုံး PFC BDNF စကားရပ်ထဲမှာကိုကင်း-သွေးဆောင်အပြောင်းအလဲများကိုဆန်းစစ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယခင်ကထုတ်ဝေလေ့လာမှုတိုက်ရိုက်နှိုင်းယှဉ်ရေးဆွဲနိုင်ရန်အတွက်ရှေးခယျြခဲ့သညျ .
ကြွက် (100 မီလီဂရမ် / ကီလိုဂရမ်, ip ဆိုဒီယမ် pentobarbital) anesthesized နှင့်4M က PB, သော pH 0.1 (PFA) တွင်ရေခဲ-အအေး 7.4% paraformaldehyde နှင့်အတူ perfused ခဲ့ကြသည်။ အသီးအသီးကဦးနှောက်ကနေတစျခု hemisphere golgi အစွန်းအထင်းများနှင့်စစ်ခင်းကျင်း tomography များအတွက်အခြား hemisphere အတွက်အသုံးပြုခဲ့သည်။ array hemisphere4နာရီနှင့် Golgi hemisphere များအတွက် 2.5% sucrose နှင့်အတူ 2% PFA အတွက် Post-fixed ခဲ့ကြသည် 48% PFA အတွက်4ဇများအတွက် fixed post ကိုရကြ၏။
array tomography စမ်းသပ်ချက်ယခင်ကဖော်ပြထားသကဲ့သို့ဖျော်ဖြေခဲ့ကြ , ။ အတိုချုပ်, PFA fixed တစ်ရှူးဗဓေလသစ်အတွက် embedded နှင့် mPFC များ၏အဆင့်မှာ Coronal (70 nm) အပိုင်းတစ်ဖဲကြိုးအဖြစ်ဖြတ်ကောက်ယူခဲ့ကြသည်။ ဖဲကြိုး Tris အတွက် 50 MM glycine အတွက် hydrated နှင့်ဖြေရှင်းချက်ပိတ်ဆို့ခြင်းအတွက်ပိတ်ဆို့ (Tris ကြားခံအတွက် 0.05% Tween / 0.1% bovine သွေးရည်ကြည် albumin (50 MM Tris / 150 MM NaCl, သော pH 7.6) ခံခဲ့ရသည်။ အဆိုပါဖဲကြိုးမူလတန်းပဋိ, GAD65 (နှင့်အတူစွန်းခဲ့ကြ Chemicon), 95 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်မှာနေ့ချင်းညချင်းဖြေရှင်းချက်ပိတ်ဆို့ခြင်းအတွက် PSD4 (ဆဲလ် signal), သို့မဟုတ် synaptophysin (Abcam), ။ Ribbon Tris ကြားခံနှင့်အတူဆေးကြောခြင်းနှင့် 1 မှာအလယ်တန်းပဋိနှင့်အတူစွန်းခဲ့ကြ ဖြေရှင်းချက်ပိတ်ဆို့ခြင်းအတွက် 50 (ဆိတ် Anti-mouse ကို Alexa-မုန့်ညက် 488 နှင့်ဆိတ်သငယ်ကိုဆန့်ကျင်ယုန် cy3 သို့မဟုတ်မြည်း Anti-ယုန် cy5) ။ ဖဲကြိုးကောင်တာတိုင်းအပိုင်းအပေါ်တူညီတဲ့က်ဘ်ဆိုက်များရှာဖွေရာတွင်အဆင်ပြေချောမွေ့စေရန် DAPI နှင့်အတူစွန်းခဲ့ကြသည်။ tile-scan ကပုံရိပ်တွေကိုတစ်ဦး Zeiss AxioImager Z2 epifluorescence ဏုသုံးပြီးစုဆောင်းခဲ့ကြသည်။ ဖဲကြိုးနှုန်း 20-30 အမှတ်စဉ်အပိုင်းတစ်ခုချင်းစီအပေါ်တူညီတဲ့ site မှပုံများခင်းကျင်း tomography များအတွက်အထူးပြုအလိုအလျောက်အစီအစဉ်များနှင့်အတူ 63x မှာဝယ်ယူခဲ့ကြသည်။
array Tomography အားသုံးသပ်ခြင်း
တစ်ခုချင်းစီကိုဖဲကြိုးကနေအမှတ်စဉ်ပုံများ, ဆင့်ကဲဖွင့်လှစ်ခဲ့တဲ့ stack ကူးပြောင်းနှင့်စတန်းဖို့ဒ်တက္ကသိုလ်မှခ Busse ၏ plugins ကို MultiStackReg နှင့် StackReg (ယဉျကြေးနှင့်အတူ aligned ယောက် , ။ သီးနှံသေတ္တာများ (19.5 μmx19.5μm) အရေအတွက်များအတွက် neuropil အတွက်အကျိုးစီးပွား (Roi) ၏ဒေသများတွင်ရွေးဖို့အသုံးပြုခဲ့ကြသည်။ ရွေးချယ်မှုအာရုံခံဆဲလ်အသေကောင်များသို့မဟုတ်အခြားမို features တွေဖယ်ထုတ်ခဲ့ရသည်။ အလိုအလျောက်ပုံရိပ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ, synaptophysin များအတွက်အကျိုးစီးပွား (သို့မဟုတ် ROIs) ၏ကောက်ပဲသီးနှံ, အချိုမှုအက်ဆစ် decarboxylase-65 (GAD65) နှင့် PSD95 အဘို့အလိုအလြောကျ ImageJ အတွက်အလိုအလျောက် algorithms နှင့်အတူအသီးသီး thresholded ခဲ့ကြသည်။ ကောက်ပဲသီးနှံ coded ခဲ့ကြသည်များနှင့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခွအေနအေမှမျက်စိကန်းကို run ခဲ့သည်။ အပြုသဘော synapses အဖြစ်ဖော်ထုတ် puncta ၏နံပါတ်များကိုတွက်ချက်ရန်တစ်ခု automated, တံခါးခုံ-based detection စနစ်အစီအစဉ်ကိုယခင်ကဖော်ပြထားအဖြစ်အသုံးပြုခဲ့သည် ။ presynaptic ဆိပ်ကမ်း, excitatory postsynaptic ဆိပ်ကမ်းများနှင့်ထွေအုပ်-အပြုသဘော၏ရာခိုင်နှုန်း၏သိပ်သည်းဆ (inhibitory) synapses အဆိုပါ PFC ကနေနှစ်ခုကွဲပြားခြားနားသောတစ်ရှူးလုပ်ကွက်ကနေစုဆောင်းတိရိစ္ဆာန်နှုန်း 75 နမူနာဆိုဒ်များပျမ်းမျှ (ဎကနေတွက်ချက်ခဲ့ကြသည် =5postsynaptic puncta နှင့်5ဆားကုသတိရိစ္ဆာန်များနှင့် 29,154 ကင်းကုသတိရိစ္ဆာန်များကိုဖြတ်ပြီး 53,565 နမူနာဆိုက်များမှ 818 postsynaptic နှင့်5presynaptic puncta ဖြတ်ပြီး 29,662 နမူနာဆိုက်များမှ 17,034 presynaptic puncta စုစုပေါင်းကုသ 588 ကိုကင်း,5ဆားကုသတိရိစ္ဆာန်များ) ။ အဆိုပါပျမ်းမျှ synapses သိပ်သည်းဆများအတွက်တန်ဖိုးများနှင့်တိရစ္ဆာန်နှုန်း inhibitory synapses ၏ရာခိုင်နှုန်းတွက်ချက်ခြင်းနှင့် t-စမ်းသပ်မှုအုပ်စုတစ်စုအကြားခြားနားချက်ကိုဆိုလိုသည်ရှိခဲ့သည်ရှိမရှိစမ်းသပ်ဖို့တိရစ္ဆာန်ပျမ်းမျှသုံးပြီး run ခဲ့ကြသည်။
Rapid-Golgi Method ကို
ယခင်ကဖော်ပြထားသကဲ့သို့လူပျိုအပိုင်း Golgi အစွန်းအထင်းဖျော်ဖြေခဲ့သည် , ။ အတိုချုပ်တစ်ဦးချင်းစီတိရစ္ဆာန်၏တဦးတည်း hemisphere ထံမှ mPFC 100 μm Coronal ကဏ္ဍများသို့ဖြတ်ခဲ့ 1 M က PB, သော pH 0.1 အတွက်သုံးဆေးကြောနောက်တော်သို့လိုက် 7.4% osmium tetraoxide အတွက် Post-fixed ။ ကဏ္ဍများ, နေ့ချင်းညချင်း 3.5% ပိုတက်စီယမ် dichromate နွေးထွေးစွာရှိနေပြီးခေတ္တဆေးကြောခြင်းနှင့်သားညှပ်ပေါင်မုနည်းလမ်းအားဖြင့် 1.5%, ငွေနိုက်ထရိတ်နှင့်အတူထိုးဖောက်မှုခဲ့ကြသည် ။ ကဏ္ဍများ xylene နှင့် coverslipping အတွက် de-fatting အားဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက်အရက်ပြင်းအားများတဲ့စီးရီးမှတဆင့် 20% sucrose နှင့်ရေခန်းခြောက်နှင့်အတူ gelatin-coated ဆလိုက်ပေါ်မှာတပ်ဆင်ထားခဲ့သည်။
Golgi ဆလိုက် coded နှင့်အခြေအနေမှမျက်စိကန်းသောခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာအပေါင်းတို့နှင့်အတူတူပင်စမ်းသပ်နေဖြင့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခဲ့ကြသည်။ အာရုံခံ images နဲ့သဲလွန်စများနှင့် dendritic ကျောရိုး၏ကိုယ်စားလှယ်ပုံရိပ်တွေဟာ 51 × 20 NA ရည်မှန်းချက်နဲ့ပေါင်းစပ်စက်တပ်ဇာတ်စင် (မတိုင်မီကသိပ္ပံ, Rockland, MA) နဲ့တစ်ဖြောင့်မတ် BX0.7့Olympus ဏုသုံးပြီးစုဆောင်းခဲ့ကြသည်။ dendritic စိမျးခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာဘို့,7အာရုံခံတိရိစ္ဆာန်နှုန်းခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာအတွက်ရွေးချယ်ခဲ့ကြသည်။ ကျနော်တို့အသီးသီးဖြင့် Macro NeuronJ နှင့်အဆင့်မြင့် Sholl ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းသုံးပြီး neurite အရှည်နှင့်ရှုပ်ထွေးတိုင်းတာ။ (Basal နှင့် apical dendrites အပါအဝင်) 5-250 μmအကြား radii မှာအာရုံစူးစိုက်မှုစက်ဝိုင်းအတွင်းလမ်းဆုံ (ဌာနခှဲကမှတ်) ၏အရေအတွက်မှာအုပ်စုများအကြားတိုင်းထွာခြင်းနှင့်နှိုင်းယှဉ်ခဲ့ကြသည်။ Basal dendrites တစ် 4x ရေနံ-နှစ်မြှုပ်ခြင်းရည်ရွယ်ချက်နှင့်အတူတစ်ဦး Zeiss AxioImager Z5 epifluorescence ဏုသုံးပြီးတိရိစ္ဆာန်နှုန်း 20-5 အာရုံခံကနေအာရုံခံဆဲလျနှုန်းဆန်းစစ်ခဲ့ကြသည်တတိယအမိန့်ထံမှကျောရိုးသိပ်သည်းဆခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ, အရှည်အနည်းဆုံး7μm၏ 2-63 အစိတ်အပိုင်းများသည်။ ယခင်ကဖော်ပြထားသကဲ့သို့ကျောရိုး shape သုက်ပိုးပုံသဏ္ဌာန်ခွဲခြားခဲ့သည် ။ တစ်ခုချင်းစီကိုကျောရိုး၏တစ်ဦးချင်းစီ dendritic အစိတ်အပိုင်းနှင့်ကျောရိုး shape သုက်ပိုးပုံသဏ္ဌာန် (ပါးလွှာပေးသော Stubby, မှို, ခွက်ကို-shaped) အတွက် linear ကျောရိုးသိပ်သည်းဆအုပ်စုများအကြားနှိုင်းယှဉ်ခဲ့ကြသည်။ ကနျြးမာရေးအမျိုးသား Institute (ImageJ) မှ open source software Golgi နှင့်စစ်ခင်းကျင်း tomography data တွေကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာအတွက်အသုံးပြုခဲ့သည်။
ကိုကင်းကနေ Abstinence စုစုပေါင်း synapses သိပ်သည်းဆကိုလျော့နည်းစေ
array tomography ကင်း Self-အုပ်ချုပ်မှုကနေ abstinence တုံ့ပြန်အတွက် PFC အတွက်ပေါ်ပေါက်သောတိကျတဲ့ morphological ပွောငျးလဲဆုံးဖြတ်ရန်အလို့ငှာ excitatory နှင့် inhibitory synapses နှစ်ဦးစလုံးအတွက်အပြောင်းအလဲများကိုတိုင်းတာရန်အသုံးပြုခဲ့သည်။ array tomography inhibitory, စုစုပေါင်း၏တိကျသောအရေအတွက်ဘို့ခွင့်ပြုတဲ့ High-throughput နည်းလမ်းဖြစ်တယ်, သေးငယ်လွန်းဖြစ်ကြောင်းအဆောက်အဦများအတွက် excitatory synapses စနစ်တကျရိုးရာ confocal microscopy နည်းလမ်းများနှင့်အတူဖော်ထုတ်သို့မဟုတ်ဒေသသုံးအဖြစ်ပြန်ဆိုခံရဖို့ ။ နှစ်ဦးစလုံး inhibitory နှင့် excitatory synapses မူးယစ်ဆေးဆုလာဘ် circuitry ၏မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအစိတ်အပိုင်းများဖြစ်သကဲ့သို့ , ,  ကျနော်တို့ကိုကင်းကနေ abstinence စဉ်အတွင်း PFC အတွက် morphological ပြောင်းလဲမှုများကိုအကဲဖြတ်ဖို့ဒီဝတ္ထုနည်းစနစ်ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ ထမ်းပိုး-ဆားနှင့်5ကင်း-အတွေ့အကြုံရှိကြွက်များ PSD5 တစ် postsynaptic excitatory အမှတ်အသား, synaptophysin တစ် presynaptic အမှတ်အသားနှင့် inhibitory အာရုံခံခြင်းနှင့် synapses အမည်တပ်ထားသောအရာ GAD95 မှပဋိပစ္စည်းနှင့်အတူစွန်းခဲ့ကြသည် 65 တဦးကဦးနှောက် hemisphere ကနေခုနစ်ဆယ် nm PFC ကဏ္ဍများ။ synapses သိပ်သည်းဆ inhibitory synapses ၏ရာခိုင်နှုန်း (cortical အလွှာ V ကိုဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပုံ 1A နှင့် 1B) ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ရလဒ်များကို (ကိုကင်းကနေ abstinence စဉ်အတွင်း synaptophysin သိပ်သည်းဆအတွက်သိသာထင်ရှားသောကျဆင်းခြင်းရှိကွောငျးကိုညွှန်ပြပုံ 1C), ဆိုသမျှ presynaptic ဆိပ်ကမ်း [t ကို (7) ကိုတိုင်းတာ = 2, p <0.05] ။ စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ် synapse သိပ်သည်းဆသိသာထင်ရှားသောကျဆင်းခြင်းမရှိ [t (8) = 0.48, p = PSD0.32 puncta ရေတွက်အားဖြင့်တိုင်းတာအဖြစ် 95] (ပုံ 1D) ။ စိတ်ဝင်စားစရာ GAD65-အပြုသဘော inhibitory synapses ၏ရာခိုင်နှုန်းတစ်ခုတိုးလာ [t ကို (8) ဆီသို့ non-သိသိသာသာလမ်းကြောင်းသစ်ရှိခဲ့ = -1.39, p = 0.9] (ပုံ 2E).
array tomography ကိုကင်းကနေ abstinence ၏7ရက်ပေါင်းအောက်ပါ PFC အတွက် synapses သိပ်သည်းဆမြားတှငျပွောငျးလဲဖော်ပြသည်။
လူပျိုအပိုင်း Golgi ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာကိုကင်းကနေ abstinence ၏7ရက်ပေါင်းအောက်ပါ PFC အတွက် dendritic အကိုင်းနှင့်ကျောရိုးဖွဲ့စည်းရေးမြားတှငျပွောငျးလဲဖော်ပြသည်။
ယာယီအဆိုပါ PFC အတွက်ကျောရိုးသိပ်သည်းဆတိုးမြှင့်နေချိန်တွင်ကင်းထံမှ Abstinence dendritic အကိုင်းလျော့ကျစေပါတယ်
အဆိုပါ Golgi နည်းလမ်း (synapses သိပ်သည်းဆအတွက်လေ့လာတွေ့ရှိသည့် ultrastructural ပြောင်းလဲမှုများကိုအတည်ပြုနိုင်ရန်အတွက်အာရုံခံအကိုင်းနှင့်အ dendritic ကျောရိုးသိပ်သည်းဆမြားတှငျပွောငျးလဲဆနျးစစျဖို့အသုံးပြုခဲ့သည်ပုံ 1) ။ ကျနော်တို့စစ်ခင်းကျင်း tomography လေ့လာမှုများအတွက်အသုံးပြုခဲ့တူညီတိရိစ္ဆာန်များ၏အခြား hemisphere ထံမှ PFC အတွက်အာရုံခံတဲ့အပိုင်းတစ်ပိုင်းကိုသာလျှင်ပေါ်တစ်ခုတည်းအပိုင်းလျင်မြန်စွာ Golgi impregnation ဖျော်ဖြေခဲ့ပါတယ်။ Dendritic အကိုင်း, dendritic ကျောရိုးအရေအတွက်နှင့်ကျောရိုး shape သုက်ပိုးပုံသဏ္ဌာန်အကဲဖြတ်ခဲ့ကြသည်။ တစ်ဦး လက်ခံ. -ဆားထိန်းချုပ်မှုနှင့်တစ်ဦးကိုကင်း-ထိတွေ့ကြွက်များ၏ PFC ကနေနှစ်ဦးကိုကိုယ်စားလှယ်ပိရမစ်ကြီးအာရုံခံမှာပြနေကြသည် ပုံ 2A။ Sholl ကြံစည်မှု 5-250 μmအကြား radii မှာအာရုံစူးစိုက်မှုစက်ဝိုင်းအတွင်းလမ်းဆုံ (ဌာနခှဲကမှတ်) ၏အရေအတွက်ကိုတိုင်းတာ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ရလဒ်များကို (ကိုကင်း Self-အုပ်ချုပ်မှုကနေအတင်းအဓမ္မ abstinence ၏7ရက်ပေါင်းအောက်ပါ dendritic ရှုပ်ထွေးအတွက်သိသာထင်ရှားသောလျှော့ချရေးရှိကွောငျးကိုကိုသရုပ်ပြပုံ 2B) ။ Two-လမ်းထပ်ခါတလဲလဲအစီအမံ sholl ကြံစည်မှုအချက်အလက်များ၏ ANOVA ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာကုသမှုသိသာထင်ရှားသောအဓိကသက်ရောက်မှု [F ကိုထုတ်ဖော်ပြသ(1,738) = 30.59, p <0.0001] နှင့်အချင်းဝက် [F ကို(245, 738) = 289.6, p <0.0001] (ပုံ 2B), ခင်းကျင်းလေ့လာမှုများအတွက်တိုင်းတာ synapses ၏ဆုံးရှုံးမှုနှင့်အတူသဘောတူ dendrites ၏ဆုံးရှုံးမှုကိုအတည်ပြု (ပုံ 1C) ။ ဒုတိယနှင့်တတိယအမိန့် analysis ငယ်ရွယ် dendrites ကိုကင်း abstinence ၏7ရက်ပေါင်းအောက်ပါ dendritic ကျောရိုးထဲမှာသိသိသာသာတိုးထင်ရှား [t ကို (6) = -3.12, p <0.05] (ပုံ 2D) ။ အခြားအကျောရိုး Subtype မသိသိသာသာအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိခြင်းစဉ်ကိုပိုပြီးတိတိကျကျ, ကိုကင်းထိတွေ့မှုကနေ abstinence (ပါးလွှာကျောရိုးမျိုးကွဲများ၏အရေအတွက်ကိုတိုးမြှင့်ပုံ 2E), နှစျခုလမ်းထပ်ခါတလဲလဲအစီအမံကုသမှုအဓိကသက်ရောက်မှုနှင့်အတူ ANOVA [F ကိုအားဖြင့်ထင်ရှားအဖြစ်(1,30) = 11.9, p = 0.0017] ကျောရိုးမျိုးကွဲ [F ကို(4,30) = 57.7, p <0.0001] နှင့်သိသိသာသာကုသမှု x ကိုကျောရိုးမျိုးကွဲအပြန်အလှန် [F ကို(1, 4, 30) = 8.8, p <0.0001] ။
ပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှုမှာကျနော်တို့ကိုကင်း Self-အုပ်ချုပ်မှုကနေအတင်းအဓမ္မ abstinence ၏7ရက်ပေါင်းအောက်ပါ PFC ၏အလွှာ V ကိုအတွက်အသံထွက်အခြေခံအဆောက်အဦးများနှင့် Synaptic အပြောင်းအလဲများကိုရှိပါတယ်ဆန္ဒပြခဲ့ကြသည်။ အထူးသပိရမစ်ကြီးအာရုံခံ၏ dendritic အကိုင်းနှင့်အ synaptophysin နှင့်အတူအမည်တပ်ထားသောခြုံငုံ presynaptic boutons ၏လျော့နည်းသွားသိပ်သည်းဆအားဖြင့်တိုင်းတာအဖြစ် synapses သိပ်သည်းဆအတွက်အထွေထွေဆုံးရှုံးမှုအတွက်သိသာထင်ရှားသောကျဆင်းခြင်းလည်းမရှိ။ presynaptic သိပ်သည်းဆဆုံးရှုံးမှုနေသော်လည်းအလွှာ V ကိုပိရမစ်ကြီးအာရုံခံ၏ Basal dendrites အထူးသဖြင့်ပါးလွှာသော, ပလပ်စတစ်ကျောရိုး၏, dendritic ကျောရိုးသိပ်သည်းဆတစ်ခုတိုးခံယူ။ ကျနော်တို့ PSD95 ၏သိပ်သည်းဆအတွက်သိသာထင်ရှားသောအပြောင်းအလဲများကို detect မပြုခဲ့ကြောင့်ကျောရိုးသိပ်သည်းဆအတွက် presynaptic ဆိပ်ကမ်းပေမယ်တိုးအတွက်လျှောက်လျော့နည်းမှုကြောင့် Multi-Synaptic boutons အရေအတွက်တစ်ခုတိုးဖို့ဖြစ်မည်အကြောင်းခန့်မှန်းသုံးသပ်သည်နိုင်ပါသည်။ ထို့အပြင်သူကကျွန်ုပ်တို့သည် PFC အတွက်တိုးမြှင့် inhibitory synapses ဆီသို့ဦးတည်နေတဲ့လမ်းကြောင်းလေ့လာတွေ့ရှိသည်ဟုထုတ်ပြန်ချက်တွင်ဖော်ပြထားသည်ကိုလည်းကျိုးနပ်သည်။ ပါးလွှာသောကျောရိုး plasticity တွင်ပါဝင်ပတ်သက်နေကြသည်ကတည်းက အဲဒီကျောရိုးထဲမှာတိုး dendritic အခက်များဆုံးရှုံးသောဤ denervated အာရုံခံအပေါ် Synaptic သွင်းအားစုကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့အစားထိုး plasticity ကိုယ်စားပြုနိုင်ပါတယ်။
ယခင်လေ့လာမှုများကိုကင်းသည့် NAc အတွက် dendritic Arbore နှင့်ကျောရိုးသိပ်သည်းဆတိုးပွါးကြောင်းသရုပ်ပြ -။ မကြာသေးမီက Dumitriu et al ။ , 2012  ကိုကင်းသည် dynamically အဆိုပါ NAc core နဲ့ shell ကိုအတွက် Proximity ကျောရိုးပွောငျးလဲကြောင်းသရုပ်ပြခဲ့သည်။ အဆိုပါ NAc shell ကိုအတွက်မှိုကျောရိုးခေါင်းကိုသိပ်သည်းဆလျော့ကျလာနေချိန်တွင်အထူးသ shell ကိုအတွက်ကိုကင်းကနေဆုတ်ခွာ, ပါးလွှာကျောရိုးတိုးလာ ။ NAc ၏လေ့လာမှုများနှင့်မတူဘဲ PFC တွင်အာရုံကြော shape သုက်ပိုးပုံသဏ္ဌာန်အပေါ်ကိုကင်း၏သက်ရောက်မှုကိုလေ့လာသည့်လေ့လာမှုအနည်းငယ်မျှသာရှိသည်။ , ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဒေတာကိုကင်းသည့် PFC အတွက်ကျောရိုးသိပ်သည်းဆတစ်ခုတိုး induces ကြောင်းသရုပ်ပြလတ်တလောလေ့လာမှုနှင့်ကိုက်ညီများမှာ ။ အထူးသ, ဇွဲနှင့်တည်ငြိမ်ကျောရိုးတစ်ဦးထက် သာ. ကြီးမြတ်သောတိုးခဲ့ကြွက်, ဆိုလိုသည်မှာကျောရိုးပစ္စုပ္ပန်3ရက်ပေါင်း Post-ရုပ်သိမ်းရေး, apical dendrites အပေါ်ပိုမိုမြင့်မားကိုကင်းသောအခြေအနေများအရပျကို preference ကိုရမှတ်များနှင့်ကင်း-သွေးဆောင် hyperactivity ပြသ ။ စိတ်ဖိစီးမှုများက ပြင်ဆင်. ခဲ့ကြောင်းကျောရိုးတစ်အံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်သိပ်သည်းမှုအဆငျ့, apical နှင့် Basal နှစ်ဦးစလုံး dendrites အပေါ် dendrite ၏μmနှုန်းခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်3ကျောရိုး၏တန်ဖိုးများကိုအစီရင်ခံတင်ပြကြွက် PFC အလွှာ II ကို-III ကိုအာရုံခံအတွက်တစ်ဦးကယခင်လေ့လာမှု ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ dendritic segments များ၏ ~2 ကျောရိုး / 10 μmထိန်းချုပ်ကြွက်များတွင်စံတန်ဖိုးများ (အလွှာ V ကို Basal dendrites) ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုကွဲပြားခြားနားသောအာရုံခံလူဦးရေမှဖြစ်မည်အကြောင်းအရာ, အနိမ့်နေကြသည်သို့မဟုတ်ပုံရိပ် technique ကိုအတွက်ခြားနားချက်ဖြစ်သည်။ confocal ပုံရိပ်နှင့်အတူပေါင်းစပ်လူစီဖာအဝါရောင်ဆိုးဆေး၏ iontophoretic ထိုး Radley နှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်များကအသုံးပြုခဲ့ကြစဉ်ပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှုမှာကျနော်တို့ကတစ်ခုတည်းအပိုင်းလျင်မြန်စွာ Golgi အစွန်းအထင်းနည်းလမ်းကိုအသုံးပြုခဲ့  အာရုံခံခြင်းနှင့် dendritic shape သုက်ပိုးပုံသဏ္ဌာန်မြင်ယောင်ရန်။ ထို့အပြင်ကျွန်ုပ်တို့၏တွေ့ရှိချက်ကိုလည်းဦးနှောက်အတွက်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာအပြောင်းအလဲများကိုဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြကြောင်းကင်း Self-အုပ်ချုပ်မှုကနေ abstinence များ၏ကြာချိန်၏အရေးပါမှုကိုမီးမောင်းထိုးပြ။ တစ်ဦးကယခင်ကထုတ်ဝေအစီရင်ခံစာအမျိုးသမီးကြွက်များတွင်ကင်းကနေရေရှည် (24-25 ရက်) ရုပ်သိမ်းရေးအောက်ပါ dendritic Arbore တစ်ခုတိုးသရုပ်ပြ ကျွန်ုပ်တို့၏လေ့လာတွေ့ရှိကျဆင်းခြင်းမှမတူဘဲအထီးကြွက်များတွင်အတင်းအကျပ် abstinence ၏7ရက်ပေါင်းအောက်ပါ။ ဒေတာစိမျးတွင်ဤအတိုင်းအတာများကွဲပြားခြားနားမှုများနှင့်ကွဲပြားမှုရှိနေသော်လည်းကျောရိုး၏တိုးမြှင့်အရေအတွက်အားကိုကင်း abstinence စဉ်အတွင်းအကြီးစား circuit ကိုပြန်လည်ဖွဲ့စည်းအတည်ပြု, နှစ်ဦးစလုံးလေ့လာမှုများအတွက်လေ့လာတွေ့ရှိခဲ့သည်။ အနာဂတ်လေ့လာမှုများသည်ဤဖွဲ့စည်းပုံဆိုင်ရာအပြောင်းအလဲများကိုယာယီသို့မဟုတ်ကြာရှည်ရှိမရှိဆုံးဖြတ်ရန်အလို့ငှာတွင်ဤဖြစ်ရပ်များ၏အချိန်သင်တန်း elucidate ပါလိမ့်မယ်။
ကျွန်ုပ်တို့၏တွေ့ရှိချက်ကိုကင်း Self-အုပ်ချုပ်မှုကနေအတင်းအဓမ္မ abstinence ပြောင်းလဲနေသောဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာအပြောင်းအလဲများကို induces နှင့် PFC အတွက် Synaptic Re-အဖွဲ့အစည်းကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်ကြောင်းဖော်ပြသည်။ ဤရလဒ်သည်ထပ်ခါတလဲလဲကင်းထိတွေ့မှု၏ရလဒ်အဖြစ်တွေ့ရှိနိုင်ပါသည်သော PFC အတွက် hypo-လှုပ်ရှားမှုရှင်းပြစေခြင်းငှါ , ။ ထို့အပွငျ, ကျွန်တော်တို့ရဲ့တွေ့ရှိချက် PFC ၏ Deactivate သရုပ်ပြယခင်လေ့လာမှုများကိုထောကျပံ့ , ကိုကင်းဆုတ်ခွာစဉ်အတွင်း medial PFC ၌၎င်း, တိုးမြှင့ extracellular ဂါဘမြို့သား ။ ထို့ကြောင့်ယန္တရားများနာတာရှည်ကင်းထိတွေ့အောက်ပါ PFC hypo-လှုပ်ရှားမှုအတွက်စာရင်းကိုင် ,  (1) တစ်ခု glutamatergic အတွက် GABAergic အတွက်တိုး, (2) လျှော့ချရေးနှင့် / သို့မဟုတ် PFC မှ dopaminergic Synaptic input ကိုအတွက် (3) လျှော့ချရေးပါဝင်နိုင်သည်။ ပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှု synaptophysin အပြုသဘော Synaptic puncta များ၏အရေအတွက်လျှော့ချခြင်းဖြင့်ညွှန်ပြအဖြစ်ကိုကင်းကနေ abstinence သိသိသာသာခြုံငုံ synapses သိပ်သည်းဆကိုလျော့နည်းစေကြောင်းပြသသည်။ ဤရွေ့ကားဒေတာဖြစ်နိုင်သည်လျော့နည်းသွားအချိုမှုသို့မဟုတ် dopamine input ကိုကကမကထပြုခဲ့သည့် PFC အတွက် Post-Synaptic တုန့်ပြန်နေတဲ့လျော့ချရေး, ရှိကွောငျးအကြံပြုအပ်ပါသည်။ အမှန်စင်စစ်ကင်း glutamatergic သေံအတွက်လျှော့ချ induces ကြောင်းညွှန်ပြလေ့လာမှုများရှိပါသည် , ။ သို့သော် Golgi နည်းလမ်းကိုသုံးပြီးကျနော်တို့ကျန်ရှိသော neurites ဖို့ PFC အတွက် excitatory input ကိုတစ်ခုတိုးအကြံပြုထားတဲ့ပိရမစ်ကြီးအာရုံခံ၏ Basal dendrites အပေါ်ပါးလွှာ dendritic ကျောရိုး၏နံပါတ်တစ်ခုတိုး, လေ့လာသည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယခင်တွေ့ရှိချက်မှာပြထားတဲ့အတိုင်းဒါတွေကပုံကွဲလွဲဒေတာ, ကျနော်တို့ဖြစ်နိုင်သည်တိုးလာ BDNF ကကမကထပြုခဲ့တဲ့အစားထိုးတုံ့ပြန်မှုနှင့်အတူစောငျ့ရှောကျ dendrites ၏ကြီးမားသောဆုံးရှုံးမှုနဲ့ဆက်စပ် synapses တစ်ခုခြုံငုံဆုံးရှုံးမှုကိုထင်ဟပ်စေခြင်းငှါ , ကျန်ရှိနေသေးသော neurites အပေါ် dendritic ကျောရိုး၏သိပ်သည်းဆတိုးမြှင့်ဖို့။
စုပေါင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့တွေ့ရှိချက်ကိုကင်း abstinence စဉ်အတွင်း PFC အတွက်ပြောင်းလဲနေသော Re-အဖွဲ့အစည်းကဖော်ပြသည်။ အထူးသသိသိသာသာ Synaptic ဆက်သွယ်မှုအတွက်လျော့ချရေး, dendritic အကိုင်း၏ဆုံးရှုံးမှုများနှင့်ကင်း Self-အုပ်ချုပ်မှုကနေအတင်းအဓမ္မမူးယစ်ဆေး abstinence ၏7ရက်ပေါင်းအောက်ပါကြွက် PFC အတွက်ပါးလွှာကျောရိုး၏နံပါတ်တစ်ခုတိုးလည်းမရှိ။ ဤရလဒ်သည်နာတာရှည်ကင်းအလွဲသုံးစားပြုသူများ၏ PFC အတွက်စောင့်ကြည့်လေ့လာအဆိုပါလေ့လာ hypo-လှုပ်ရှားမှုများအတွက်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံအခြေခံများကိုဖြစ်ကောင်းကင်းစွဲကာလအတွင်းဖြစ်ပေါ်ကြောင်းသိမြင်မှုထိန်းချုပ်ရေး၏ဆုံးရှုံးမှုကိုရှင်းပြပါလိမ့်မည်။
စာရေးသူဟာ embedded တောင့ပြင်ဆင်နေနဲ့သူ့ရဲ့အကူအညီအတွက် Gavin Sangrey ကျေးဇူးတင်ချင်ပါတယ်။
ဤလုပ်ငန်းကို NIDA မှ DA22339 နှင့် DA033641 (RCP & GSV) နှင့် DA18678 (RCP) မှထောက်ပံ့ခဲ့သည်။ HDS ကို K01 ဆု (DA030445) မှထောက်ပံ့သည်။ အချက်အလက်စုဆောင်းခြင်းနှင့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း၊ ထုတ်ဝေရန်ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်းသို့မဟုတ်လက်ရေးစာမူကိုပြင်ဆင်ခြင်းအတွက်ရန်ပုံငွေထောက်ပံ့သူများသည်အခန်းကဏ္hadတွင်မရှိခဲ့ပါ။
1 ။ Dietz DM, Dietz KC, Nestler EJ, Russo SJ (2009) psychostimulant-သွေးဆောင်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ plasticity ၏မော်လီကျူးယန္တရားများ။ Pharmacopsychiatry 42 ပျော့ပျောင်း 1S69-78 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
2 ။ Lee က KW ကင်မ် Y ကိုကင်မ်လေး, Helmin K ကို Nairn AC အ, et al ။ နျူကလိယ accumbens အတွက် D2006 နှင့် D1 dopamine အဲဒီ receptor ပါဝင်သောအလတ်စား spiny အာရုံခံအတွက် (2) ကင်း-သွေးဆောင် dendritic ကျောရိုးဖွဲ့စည်းခြင်း။ proc Natl Acad သိပ္ပံအမေရိကန်နိုင်ငံ 103: 3399-3404 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
3 ။ Norrholm SD, Bibb ဂျာ Nestler EJ, Ouimet CC ကို, တေလာ JR, et al ။ နျူကလိယ accumbens အတွက် dendritic ကျောရိုး၏ (2003) ကင်း-သွေးဆောင်ပြန့်ပွား cyclin-မှီခို kinase-5 ၏လှုပ်ရှားမှုအပေါ်မှီခိုသည်။ neuroscience 116: 19-22 [PubMed]
4 ။ ရော်ဘင်ဆင် TE, Gorny, G, Mitton အီး, Kolb B က (2001) ကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးအတွက်နျူကလိယ accumbens နှင့် neocortex အတွက် dendrites နှင့် dendritic ကျောရိုး၏ shape သုက်ပိုးပုံသဏ္ဌာန်ပွောငျးလဲ။ synapses 39: 257-266 [PubMed]
5 ။ Sarti က F, Borgland SL, Kharazia VN, Bonci တစ်ဦးက (2007) ထူးခြားသောကင်းထိတွေ့ကျောရိုးသိပ်သည်းဆနှင့် ventral tegmental ဧရိယာထဲမှာရေရှည်အလားအလာပွောငျးလဲ။ EUR J ကို neuroscience 26: 749-756 [PubMed]
6 ။ ရော်ဘင်ဆင် TE, Kolb B က (1999) ALTER စိတ်ကြွဆေးသို့မဟုတ်ကင်းနှင့်အတူအထပ်ထပ်ကုသမှုအပြီးတွင်နျူကလိယ accumbens နှင့် prefrontal cortex အတွက် dendrites နှင့် dendritic ကျောရိုး၏ shape သုက်ပိုးပုံသဏ္ဌာန်၌တည်၏။ EUR J ကို neuroscience 11: 1598-1604 [PubMed]
7 ။ et al Bolla K သည်, Ernst M က, Kiehl K ကို Mouratidis M က, Eldreth: D ။ abstinent ကင်းချိုးဖောက်မှုများ (2004) Prefrontal cortical ကမောက်ကမဖြစ်မှု။ J ကို Neuropsychiatry Clin neuroscience 16: 456-464 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
8 ။ စတိန်း RZ, Volkow ND (2002) မူးယစ်ဆေးစွဲနှင့်၎င်း၏နောက်ခံ neurobiological အခြေခံ: အတိုကျရိုကျ cortex ၏ပါဝင်ပတ်သက်မှုများအတွက် neuroimaging သက်သေအထောက်အထား။ နံနက် J ကိုစိတ်ရောဂါကုသမှု 159: 1642-1652 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
9 ။ Chen ကရီ, နာမည်ကြီး K ကို Xu H ကို, Choi JK, Mandeville JB, et al ။ (2011) ကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေး limbic နှင့်မော်တာ circuitry အတွက်ကင်းစိန်ခေါ်မှုမှယာယီတုံ့ပြန်မှုမြားတှငျပွောငျးလဲစေပါတယ်။ EUR J ကို neuroscience 34: 800-815 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
10 ။ နေရောင် W က, Rebec GV (2006) ထပ်ခါတစ်လဲလဲကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးကြွက် prefrontal cortex အတွက်ကင်း-ဆက်စပ်သတင်းအချက်အလက်အပြောင်းအလဲနဲ့ပွောငျးလဲ။ J ကို neuroscience 26: 8004-8008 [PubMed]
11 ။ Volkow ND, မုဆိုး JS (2000) စွဲလမ်းမှု, မလှူခြင်းနှင့် drive ကိုတစ်ဦးရောဂါ: အ orbitofrontal cortex ၏ပါဝင်ပတ်သက်မှု။ Cereb Cortex 10: 318-325 [PubMed]
12 ။ Jentsch JD, မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုအတွက် frontostriatal ကမောက်ကမဖြစ်မှုကနေရရှိလာတဲ့တေလာ JR (1999) Impulse: ဆုလာဘ်-related လှုံ့ဆော်မှုအားဖြင့်အမူအကျင့်များထိန်းချုပ်ရေးအတွက်ဂယက်ရိုက်။ Psychopharmacology (Berl) 146: 373-390 [PubMed]
13 ။ McFarland K ကို Kalivas PW (2001) မူးယစ်ရှာကြံအပြုအမူကိုကင်း-သွေးဆောင် reinstatement ဖြန်ဖြေအဆိုပါ circuitry ။ J ကို neuroscience 21: 8655-8663 [PubMed]
14 ။ McFarland K ကို Lapish CC ကို, Kalivas PW (2003) ကနျူကလိယ accumbens ၏အဓိကသို့ Prefrontal အချိုမှုလွှတ်ပေးရန်မူးယစ်ဆေး-ရှာကြံအပြုအမူကိုကင်း-သွေးဆောင် reinstatement mediates ။ J ကို neuroscience 23: 3531-3537 [PubMed]
15 ။ Winstanley, CA, အစိမ်းရောင်က TA, Theobald DE, Renthal W က, LaPlant မေး, et al ။ orbitofrontal cortex အတွက် (2009) DeltaFosB သော induction ကိုကင်းကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့အတွက်သိမြင်မှုကမောက်ကမဖြစ်မှု attenuating ရှိနေသော်လည်း locomotor ာင်း potentiates ။ Pharmacol ထဲကဓာတုပစ်စညျးပြုမူနေ 93: 278-284 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
16 ။ Trantham H ကို, Szumlinski KK, McFarland K ကို Kalivas PW, Lavin တစ်ဦးက (2002) ထပ်ခါတစ်လဲလဲကင်းအုပ်ချုပ်ရေး prefrontal cortical အာရုံခံ၏ electrophysiological ဂုဏ်သတ္တိများပွောငျးလဲ။ neuroscience 113: 749-753 [PubMed]
17 ။ lu H ကို, Chefer S က, Kurup PK, Guillem K ကို Vaupel DB, et al ။ အဆိုပါ medial prefrontal cortex အတွက် (2012) fMRI တုံ့ပြန်မှုကင်းပေမယ့် sucrose မဟုတ် Self-အုပ်ချုပ်ရေးသမိုင်းခန့်မှန်းထားပါတယ်။ Neuroimage 62: 1857-1866 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
18. Micheva KD, Busse B, Weiler NC, O'Rourke N, Smith SJ (2010) မတူညီသော synapses လူ ဦး ရေကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း - proteomic ပုံရိပ်နည်းလမ်းများနှင့်အမှတ်အသားများ။ Neuron 68: 639-653 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
19 ။ Micheva KD, Smith က SJ (2007) Array tomography: အာရုံကြောဆားကစ်၏မော်လီကျူးဗိသုကာနှင့် ultrastructure imaging အသစ်တစ်ခုကိရိယာတခုဖြစ်တယ်။ အာရုံခံဆဲလျ 55: 25-36 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
20 ။ et al Sadri-Vakili, G, Kumaresan V ကို, Schmidt က HD ကိုနာမည်ကြီး KR, Chawla P ကို။ (2010) ကင်း-သွေးဆောင် chromatin ပြုပြင်ကင်း၏အားဖြည့်ထိရောက်မှုပွောငျးလဲသောကြွက် medial prefrontal cortex အတွက်ဦးနှောက်-ဆင်းသက်လာ neurotrophic အချက်ကူးယူတိုးပွားစေပါသည်။ J ကို neuroscience 30: 11735-11744 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
21 ။ Koffie RM, et al Meyer-Luehmann M က, Hashimoto T က, အဒမ် KW, Mielke ML ။ postsynaptic သိပ်သည်းဆ (2009) Oligomeric amyloid beta ကိုအပေါင်းအသင်းများနှင့်အိုမင်းသော plaque အနီး excitatory synapses အရှုံးနှင့်ဆက်နွယ်နေပါသည်။ proc Natl Acad သိပ္ပံအမေရိကန်နိုင်ငံ 106: 4012-4017 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
22 ။ ပြင်းထန်မှုအပေါ်အခြေခံပြီး subpixel အနည်းမှတ်ပုံတင်ရေးမှ Thevenaz P ကို, Ruttimann UE, Unser M (1998) တစ်ဦးကပိရမစ်ချဉ်းကပ်နည်း။ ကို IEEE ဖြတ်ကျော် Image ကို Process ကို 7: 27-41 [PubMed]
23. Kopeikina KJ, Carlson GA၊ Pitstick R, Ludvigson AE, Peters A ။ (2011) Tau စုဆောင်းခြင်း tauopathy တစ် ဦး mouse ကိုမော်ဒယ်နှင့်လူ့အယ်လ်ဇိုင်းမားရောဂါ ဦး နှောက်အတွင်းရှိအာရုံခံအတွက် mitochondrial ဖြန့်ဖြူးလိုငွေပြမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ နံနက် J ကို Pathol 179: 2071-2082 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
24 ။ Gabbott PL, Somogyi J ကို (1984) က '' တစ်ခုတည်း '' အပိုင်း Golgi-impregnation လုပ်ထုံးလုပ်နည်း: အတိုင်းအတာများဖော်ပြချက်။ J ကို neuroscience နည်းလမ်းများ 11: 221-230 [PubMed]
25 ။ Izzo PN, Graybiel လေး, ဥစ္စာ P- ၏ Bolam JP (1987) စရိုက်လက္ခဏာတွေနဲ့ကြောင်၏ caudate နျူကလိယထဲမှာ [Met] enkephalin-immunoreactive အာရုံခံခြင်းနှင့်တစ်ခုတည်းအပိုင်း Golgi လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကပြပေး။ neuroscience 20: 577-587 [PubMed]
et al 26. Spiers TL, Grote HE, Garry S, Cordery PM, Van Dellen A ။ (2004) Dendritic ကျောရိုးရောဂါဗေဒနှင့် R6 / 1 Huntington ရဲ့ရောဂါ transgene ကြွက်များတွင်အတွေ့အကြုံ - မှီခို dendritic plasticity အတွက်လိုငွေပြမှု။ အာရုံကြောသိပ္ပံ 19 ဥရောပဂျာနယ်: 2799-2807 [PubMed]
၂၇။ Kalivas PW, O'Brien C (၂၀၀၈) မူးယစ်ဆေးဝါးသည်အာရုံကြောဆိုင်ရာပasိဇီဝဆေးများအဖြစ်သတ်မှတ်သည်။ Neuropsychopharmacology 27: 2008-33 [PubMed]
28 ။ အဆိုပါ dorsal prefrontal cortex ၏ပီယပ် RC, Reeder, DC, Hicks J ကို, မော်ဂန် ZR, Kalivas PW (1998) Ibotenic အက်ဆစ်ကိုတွေ့ရှိရပါသည်ကင်းရန်အမူအကျင့်အကဲဆတ်ခြင်းဟူသောအသုံးအနှုနျးနှောင့်အယှက်။ neuroscience 82: 1103-1114 [PubMed]
29 ။ Bourne J ကို, Harris က KM (2007) ပါးလွှာကျောရိုးသတိရကြောင်းမှိုကျောရိုးဖြစ်တတ်ရန်သင်ယူသလား? Curr Opin Neurobiol 17: 381-386 [PubMed]
30 ။ Dumitriu: D, Laplant မေး, မမေ့ဘူး YS, Dias က C, Janssen WG ကို, et al ။ (2012) မဟာမဲခေါင်ဒေသတွင်း, dendritic အခန်းတို့နှင့်နျူကလိယ accumbens အတွက် dendritic ကျောရိုး၏ကင်းစည်းမျဉ်းများတွင်ကျောရိုးမျိုးကွဲသတ်မှတ်ချက်။ J ကို neuroscience 32: 6957-6966 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
31 ။ တိုကျရိုကျ cortex အတွက် Munoz-Cuevas FJ, Athilingam J ကို, Piscopo: D, Wilbrecht L ကို (2013) ကင်း-သွေးဆောင်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ plasticity conditional ရာအရပျ preference ကိုနှင့်ဆက်နွယ်နေပါသည်။ နတ် neuroscience 16: 1367-1369 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
32 ။ Radley JJ, Rocher AB, Miller က M ကို, Janssen WG ကို, Liston ကို C, et al ။ (2006) ထပ်ခါတစ်လဲလဲစိတ်ဖိစီးမှုကြွက် medial prefrontal cortex အတွက် dendritic ကျောရိုးဆုံးရှုံးမှုဖြစ်ပေါ်သည်။ Cereb Cortex 16 (3): 313-320 [PubMed]
33 ။ နာတာရှည်ကင်းသည်အသုံးပြုသူများအတွက် Volkow ND, Mullani N ကို, သူမ၏သုံးသပ်ချက်ထဲတွင် KL, Adler က S, Krajewski ငွေကျပ် (1988) ဦးနှောက်သွေးစီးဆင်းမှု: positron ထုတ်လွှတ် tomography နှင့်အတူလေ့လာမှုတစ်ခု။ br J ကိုစိတ်ရောဂါကုသမှု 152: 641-648 [PubMed]
34 ။ ကြွက် medial prefrontal cortex အတွင်းဂါဘမြို့သားဂီယာအပေါ်ကိုကင်း-သွေးဆောင်အပြုအမူအကဲဆတ်ခြင်း Jayaram P ကို, Steketee JD (2005) အကျိုးသက်ရောက်မှု။ EUR J ကို neuroscience 21: 2035-2039 [PubMed]
35 ။ Madayag တစ်ဦးက, Lobner: D, Kau KS, Mantsch JR, Abdulhameed အို et al ။ (2007) ထပ်ခါတစ်လဲလဲ N-acetylcysteine ​​အုပ်ချုပ်ရေးကိုကင်းများ၏ plasticity-မှီခိုသက်ရောက်မှုပွောငျးလဲ။ J ကို neuroscience 27: 13968-13976 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
36 ။ Miguens M က, et al Del Olmo N ကို, Higuera-မာတာတစ်ဦးက, တောရက်စ်ငါ Garcia က-Lecumberri ကို C ။ အချိန်သင်တန်း microdialysis လေ့လာမှု: ကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးနှင့်မျိုးသုဉ်းစဉ်အတွင်းနျူကလိယ accumbens အတွက် (2008) အချိုမှုများနှင့် aspartate အဆင့်ဆင့်။ Psychopharmacology (Berl) 196: 303-313 [PubMed]